Fanandramana Covid takian'ny firenena: ny firenena rehetra sy ny takiana | Vaovao momba ny dia
Luis Martinez | 19/04/2021 10:10 | soso-kevitra, General
Fantaro ny Fanandramana Covid notakin'ny firenena dia nanjary fampahalalana tena ilaina taorian'ny herisetra iray taona. Liana ianao ny hiaraka amin'ny daty miaraka amin'izy ireo, indrindra raha tsy maintsy atao izany mandeha matetika ho an'ny orinasa na hitsidihana ny havany.
Satria ny firenena tsirairay dia manana taham-pahavoazana aretina isan-karazany hatramin'izay mandeha miadana ny vaksinina, tsy misy lamina iraisana azo apetraka amin'ny fitakiana ilaina amin'ny dia. Tsy azo natao akory ny nampihatra izany tao anatin'ny Vondrona Eoropeana, izay ny fanjakan'izy ireo koa tsy mitovy amin'ny filàna na tsia hanaovana fitsapana hitsidihana ny faritaniny avy. Noho izany rehetra izany, hodinihinay ho anao ny fitsapana Covid ilaina amin'ny firenena.
1 Fanandramana Covid takian'ny firenena: manomboka amin'ny tena ilaina ka hatramin'ny fahazoan-dàlana
1.1 Fanandramana Covid ao amin'ny Vondrona Eropeana
1.1.5 Netherlands, anisan'ny henjana indrindra amin'ny fitsapana Covid takian'ny firenena
1.2 Fanandramana Covid takian'ny firenena ivelan'ny Vondrona Eropeana
1.2.3 Suisse, iray amin'ny fitakiana mafy indrindra amin'ny resaka Covid takian'ny firenena
Fanandramana Covid takian'ny firenena: manomboka amin'ny tena ilaina ka hatramin'ny fahazoan-dàlana
Hanomboka ny Vondrona eoropeanina izahay, satria ireo firenena mandrafitra azy no anisan'ny be mpitsidika indrindra. Avy eo, hojerentsika ny toe-javatra any amin'ny faritra hafa eto amin'izao tontolo izao, indrindra any amin'ireo firenena izay mahazo mpandeha betsaka indrindra.
Fanandramana Covid ao amin'ny Vondrona Eropeana
Misy ny fanjakan'ny Vondrona eropeana fepetra takiana somary henjana rehefa mandray mpitsidika. Ny fanitarana mahery vaika ny valanaretina any amin'ny faritanin'izy ireo dia manome torohevitra toy izao. Raha ny marina, ankoatry ny fitsapana mifanaraka aminy na ny fitsapana PCR dia matetika no mangataka antontan-taratasy hafa izy ireo. Tsy ho ela dia heverina koa ny fampiharana a Pasipaoro covid. Andao hojerentsika ny fitsipiky ny firenena.
Diniho España faritra be risika. Noho izany, ny refiny dia ny henjana indrindra. Raha mandehandeha avy any amin'ny firenentsika ianao dia tsy maintsy aseho ny PCR ratsy 48 ora alohan'ny hahatongavanao. Ho fanampin'izay, tsy maintsy hisoratra anarana amin'ny a ianao firaketana nomerika ary, indray mandeha ao amin'ny firenena, vonjeo a Karoka 10 andro izay ahena ho 5 raha manolotra fitsapana Covid ratsy ianao.
Tsy mamela ny sidina avy any Espana amin'izao fotoana izao. Raha avy any amin'ny firenena hafa no anaovanao izany dia tsy maintsy asehonao PCR ratsy hatramin'ny 72 ora alohan'ny hahatongavanao. Toy izany koa, tsy maintsy manao a fanekena elektronika fa tsy mijaly amin'ny aretina ianao ary mameno a Toerana misy ny mpandeha. Farany, hitaky a Karoka 7 andro.
Cycler termal na milina PCR
Mamela anay hiditra amin'ny fireneny ny mpifanila vodirindrina aminay, fa ianao kosa tsy maintsy manolotra PCR ratsy miaraka amin'ny 72 taona farafahakeliny ary manarona fanambarana nianiana fa tsy manana Covid ianao. Toy izany koa, raha sendra misy soritr'aretina eny an-dalana na rehefa tonga ianao dia tsy maintsy mametra-tena.
Izy io dia iray amin'ireo firenena voalohany niharan'ny aretin'ny aretina ary mamela ny hidiran'ny Espaniola ihany koa. Saingy, raha te hitsidika fahagagana toa ianao Roma o FlorenciaTsy maintsy asehonao ihany koa ny PCR ratsy indrindra vita 48 ora indrindra alohan'ny dia ataonao ary tsy maintsy mameno taratasy fanekena ianao alohan'ny hanombohana ny dia. Ary raha manana soritr'aretina ianao, dia tsy maintsy mitokantokana.
Netherlands, anisan'ny henjana indrindra amin'ny fitsapana Covid takian'ny firenena
Araka ny lazainay aminao, amin'ireo firenena mamela ny dia avy any Espana, ity dia iray amin'ireo henjana indrindra amin'ny fepetra takiana. Satria mangataka fitsapana PCR hatramin'ny 72 ora izy ireo, ary koa mameno a endrika fisavana na eo am-pivoahana na amin'ny làlana miverina ary fepetra hafa.
Na izany aza, raha manana soritr'aretina ianao na eo aza izany rehetra izany dia hanakana anao tsy hiditra ao amin'ny firenena izy ireo. Ary, raha toa ka tratra izany rehefa tonga ianao dia tsy maintsy manangona Karoka 10 andro.
Azonao atao ihany koa ny mandeha any amin'ny mpifanila vodirindrina amintsika raha tianao izany, saingy misy famerana isan-karazany. Tsy maintsy mampiseho PCR ratsy ianao ary tanterahina ao anatin'ny 72 ora alohan'ny hidiranao ao amin'ny firenena.
Ianao koa tsy maintsy manarona a karatra misy ny mpandeha Ary, raha i Espana dia amin'ny ambaratonga tranga maherin'ny 500 isaky ny mponina 100 000 (izay tsy misy ankehitriny), dia tsy maintsy mitahiry Karoka 14 andro. Etsy ankilany, raha mankany ianao Madeira o Azores, hangataka aminao koa izy ireo hameno a fanontaniana momba ny epidemiolojika.
Olona iray no mandray ny vaksinin'ny Covid
Fanandramana Covid takian'ny firenena ivelan'ny Vondrona Eropeana
Mahita fitakiana isan-karazany lehibe kokoa isika any amin'ireo firenena izay tsy an'ny eoropeanina iraisana. Any amin'ny firenena sasany dia tsy ilaina ny porofo, fa kosa hotsipintsika ireo. Andao hojerentsika hoe iza amin'ireo no mitaky karazana fitakiana.
Manomboka amin'ny fanjakana izay vao avy nandao ny Vondrona eropeana isika ary manana ny taha farany ambony amin'ny vaksiny eto amin'izao tontolo izao. Azonao atao ny mitsidika azy raha tianao, fa tsy maintsy mameno a endrika endrika mpandeha amin'ny fahatongavanao. Ankoatr'izay, miankina amin'ny vanim-potoana epidemiolojika misy azy dia mety mila manao a ianao Karoka 10 andro.
Eto amin'ity firenena ity koa dia nandroso be ny fanaovana vaksiny. Na izany aza, tsy mamela ny fidiran'ny mpandeha avy any Espana. Etsy ankilany, raha tonga avy any amin'ny toerana hafa ianao, dia ho afaka hiditra ao amin'ny firenena, fa tsy maintsy mampiseho PCR ratsy vita 72 ora alohan'ny hahatongavanao na amin'ny daty akaiky azy kokoa.
Suisse, iray amin'ny fitakiana mafy indrindra amin'ny resaka Covid takian'ny firenena
Ny firenena Suisse dia eo afovoan'ny kontinanta taloha ary, na dia tsy an'ny Uni eropeana aza izy io dia ao anatin'ny faritr'i Schengen. Io fifanarahana io dia nanala ny sisin-tany ivelany, na izany aza, amin'izao fotoana izao dia tena mamepetra i Suisse raha ny fandraisana ireo mpandeha no jerena.
Azonao atao ny manatona azy, saingy tsy maintsy aseho PCR ratsy iray tontosa 72 ora alohan'ny hahatongavanao. Rehefa tonga any, dia tsy maintsy manao a Karoka 10 andro Azo ahena ho 7 izany raha toa ka mahazo PCR hafa ianao. Ary koa, tsy maintsy mamita a ianao karatra fitadiavana fifandraisana.
Ny firenena niavian'ny areti-mandringana dia voafetra ihany koa ankehitriny amin'ny resaka fandraisana mpitsidika. Raha te-ho any Chine ianao dia mila manolotra PCR sy a IGM (detection immunoglobulin) ratsy natao 48 ora alohan'ny nahatongavanao. Ho fanampin'izany, dia tsy maintsy ho laboratoara iray ao amin'ny whitelist nomen'ny masoivohon'ny firenena.
Ity iray ity fotsiny dia tsy maintsy omeny anao a tarjeta ary rehefa tonga any Sina ianao dia tsy maintsy mandeha avereno PCR ary fenoy a endrika fahasalamana. Raha tsara ny voalohany dia voatery mandany ianao a Karoka 14 andro.
Ny firenena Amerika Avaratra dia mandrara ny fidirana amin'ny faritaniny ho an'ireo mpandeha izay efa nandalo ny 14 andro mialoha ny hahatongavanao any Espana. Raha mandeha firenena hafa ianao dia tsy maintsy manarona a endrika fampahalalana ary koa a fanambarana ara-pahasalamana alohan'ny hiaingana. Ankoatry ny, samy manana ny fameperana azy ny fanjakana.
Ny mpifanila trano aminay atsimo nampiato ny sidina avy any Espana. Raha tonga avy any amin'ny firenena hafa ianao dia tsy maintsy mampiseho PCR ratsy mahatratra 72 ora alohan'ny dia. Ankoatr'izay dia tsy maintsy soratana amin'ny teny frantsay, anglisy na arabo. Farany, rehefa tonga ianao dia hangataka ny anao karatra fahasalamana mpandeha.
Na dia ao amin'ny antipodes-nay aza izany dia mety mila na te-handehandeha any Aostralia ianao. Amin'izay dia holazainay aminao izany tsy nahazo alalana avy any Espana izy io. Raha miala amin'ny firenena hafa ianao dia hangataka anao izy ireo fanambarana momba ny dia ary azonao terena handalo a Karoka 14 andro.
Na eo aza ny iray amin'ireo firenena tratran'ny areti-mifindra mafy indrindra i Brazil, dia mamela anao hivezivezy avy any Espaina. Na izany aza, tsy maintsy asehonao PCR ratsy iray vita hatramin'ny 72 ora alohan'ny dianao ary fenoy a endrika fahasalamana.
Raha miresaka momba ny fanandramana Covid ilaina amin'ny firenena isika dia i Mexico no iray amin'ireo be mpitady indrindra. Handeha handehandeha any dia tsy maintsy handrakofana ny antso fotsiny ianao Fanontaniana momba ny famantarana ny loza amin'ny mpandeha amin'ny fahatongavanao.
Ny firenena Karaiba, mifamatotra ara-tantara amin'i Espana, dia mamela anao hiditra raha avy any amin'ny firenentsika ianao. Na izany aza, mitaky be loatra izany raha ny fepetra takiana. Tsy maintsy manolotra PCR vita 72 ora ianao alohan'ny dia.
Rehefa tonga ianao dia tsy maintsy mameno a fanambarana ny fahasalamana ary azo atao ny manao anao PCR hafa. Ho fanampin'izay, manana adidy handoa a ianao taha 30 dolara amerikana ary, raha toa ka miabo ny PCR farany voatanisa dia voatery hanaiky ianao fitokana-monina.
Ity firenena ity koa dia voa mafy tamin'ny areti-mandringana. Raha ny marina dia voarara izao ny dia avy any Espana. Raha avy any amin'ny firenena hafa no anaovanao izany dia tsy maintsy asehonao PCR ratsy hatramin'ny 72 ora ary sonia a fanekena ara-pahasalamana. Farany, tsy maintsy mandray anjara ianao porofo fa manana fiantohana ianao izay manefa ny fandaniana ara-pahasalamana mety ateraky ny Covid raha sanatria ka voan'ny aretina ianao.
Ivotoerana fikarohana Covid-19 any Nouvelle Zélande
Izy io dia iray amin'ireo firenena voalohany, taorian'i Sina, izay tratry ny aretina pesta. Angamba izany no mahatonga azy io henjana be rehefa manaiky mpitsangatsangana avy any amin'ny firenen-kafa. Raha ny an'ireo avy any Espana, tsy avelany hiditra raha nandany ny 14 andro farany teto amin'ny firenentsika.
Ny sidina avy any Espana dia naato, farafaharatsiny, hatramin'ny April 30. Raha mandeha any an-tany hafa ianao dia tsy maintsy mampiseho PCR ratsy amin'ny teny Anglisy ary vita hatramin'ny 72 ora alohan'ny hahatongavanao. Ary koa, mety terena ianao hitahiry vola Karoka 14 andro.
Ny firenena Andes koa dia manana voarara ny sidina avy any Espana, farafaharatsiny hatramin'ny tapaky ny volana aprily. Raha avy any amin'ny toerana hafa ianao dia tsy maintsy mampiseho PCR ratsy vita 72 ora alohan'ny dia. Ianao koa dia mila mampakatra a tatitra ratsy ary manarona a fanekena ara-pahasalamana koa mandritra ny 72 ora alohan'ny sidinao ao Ity rohy ity.
Ho famaranana, nataonay ho anao ny famerenana ny Fanandramana Covid takian'ny firenena. Araka ny hitanao, raha te hanao dia ianao, dia iharan'ny fameperana maro. Ary tsy hihatsara izany raha tsy be ny vaksiny. Fa farafaharatsiny afaka mandeha foana ianao, izay tsy zavatra kely.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Fanandramana Covid takian'ny firenena